Madaxweyne wax ka baddalay magaciisa (Ogow Sababta!) – HalQaran.com
Uganda (Halqaran.com) – Madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa si rasmi ah u wax uga baddalay magacyadiisa si uu ugu daro magac loo bixiyay markii uu yaraa.
Magacaas oo la yirhaado ‘Tibuhaburwa’ waxaana luqadda Runyankore loola jeeda “Qofka aan qaadan talada ama la sixi karin”
Arrintan ayaa hadal badan ka dhex dhalisay baraha bulshada Uganda, halka dadka qaar ay la yaaban yihiin waxa ay aheyd shaqada la taliyeyaasha madaxweynaha markii uu gaarayay go’aankaas.
Waxaa haatan madaxweynaha loogu yeeri doonaa Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni.
Madaxweynaha weligiisa ma uusan shaacin magacan tan iyo intii uu xilka qabtay 34 sano ka hor.
Sida uu muujinayo dokumenti dhanka sharciga ah oo lasoo saaray 6-dii bishan Oktoobar, in magacan uu weligiisba ku qornaa shahaadooyinka waxbarasho ee madaxweynaha.
Waxay tallaabadan imaaneysaa xilli guddiga doorashada Uganda ay ku dhawaaqeen in musharraxiinta u tartameyso doorashada 2021-ka laga doonayo in magacyadooda ay waafaqsan yihiin kuwa ku qoran shahaadooyinka waxbarashada.
Guddiga doorshada waxay dhawaan shaaciyeen in musharraxa aanan magaciisa waafaqsaneyn midka ugu qoran shahadadiisa loo ogolaan doonin doorashada.
Sanadkii 2017-kii, maxkamad ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaantay guusha doorasho ay gaareen xildhibaano kaddib markii la ogaaday inay magacyo kala duwan ay isticmaaleen.
Tags: Madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Tibuhaburwa
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay ehellada iyo qaraabada Marxuum Cali Khaliif Galeyr